ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်... (အပိုင်း -၁၃) - For her Myanmar
သေရင် ထားတို့နောက် ပါမယ့် ကုသိုလ်တွေပဲ လုပ်ကြရအောင် ကို..
“ဒါနဲ့ ထား ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစပြီး ကို ခွင့်ယူထားတယ်။”
“ရှင်… ဘာအတွက်လဲ ကို။”
“ဟင့်အင်း ထား မသွားချင်ဘူး။”
“ဘာဖြစ်လို့လဲ ထား ရဲ့။ ကိုယ့်ကားနဲ့ ကိုယ် အေးအေးဆေးဆေးပဲ သွားမှာဆိုတော့ ထား မပင်ပန်းပါဘူး။”
“ဟင့်အင်း။ ထား ပင်ပန်းမှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး ကို။ ခရီးတစ်ခု ထွက်ဖို့ဆိုတာ လက်ထဲမှာ အနည်းဆုံး ၄၊ ၅ သိန်းလောက်ရှိမှ အဆင်ပြေမှာလေ ကိုရဲ့။”
“နှမြောစရာကြီး ကို ရယ်။ ဘာလုပ်မှာလဲ။”
“ထားရယ်…. ပိုက်ဆံဆိုတာက ကိုတို့သေရင် ပါသွားမှာမှ မဟုတ်တာ”
သေဆုံးသည့် စကားကို သူ ယောင်ပြီး ထွက်သွားမိ၍ လန့်သွားသေးပေမဲ့ ထား က သူ ဘာပြောသည်ကို မသိနိုင်ကြောင်း စဉ်းစားမိမှ စိတ်အေးရပြန်သည်။
“အယ့်လယ်… ကိုတောင်မှ တရားတွေ ဘာတွေ ရနေပြီလား။”
“တရားရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ထားရဲ့။ ဒီလိုပဲ ပြောကြည့်တာပါ။”
“အင်း… ပြောလေ ထား။ ဘာပြောချင်လို့လဲ။”
“စောနက သေရင် ကိုယ့်နောက်မပါဘူးဆိုပြီး ကို ပြောလို့ ထား တွေးမိတာပါ။”
“ဟုတ်ပါပြီ ပြောပါ ထားရဲ့။”
“ထား တို့ ခရီးမထွက်တော့ဘဲ သေရင် ထားတို့နောက် ပါမယ့် ကုသိုလ်တွေပဲ လုပ်ကြတာပေါ့။”
“လုပ်လေ ကောင်းသားပဲ။ ထား က ဘာတွေလုပ်ချင်လို့လဲ။”
“၅ သိန်းလောက်ကုန်မယ်ဆိုရင် ၂ သိန်းကို မိဘမဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သွားလှူမယ်။ နောက် ၂ သိန်းကိုတော့ ဆေးရုံမှာ လှူမယ်။ ကျန်တဲ့ ၁ သိန်းကိုတော့ ဘုရားတည်တဲ့ထဲမှာ လှူလိုက်မယ်။ ဘယ်လိုလဲ ကို။ သဘောတူရဲ့လား။”
“သဘောမတူစရာမရှိပါဘူး ထားရယ်။ ကိုရှာထားသမျှက ထား အတွက်ချည်းပဲကို။ ထား စိတ်ကြိုက်သာ စီမံခန့်ခွဲပါ။ ဒါမဲ့ ကို မေးရဦးမယ်။ ဘုရားက ဘယ်မှာ တည်နေတာလဲ။”
“သြော်… ဟုတ်သားပဲ။ ကို့ကို ပြောဖို့မေ့နေတာ။ ဟိုနေ့က အိမ်က ဖုန်းဆက်တယ်။ ထားတို့ဆီကလူတွေ အကုန်လုံးစုပြီးတော့ ဘုရားတစ်ဆူတည်ကြမလို့တဲ့။ အဲ့မှာ ထား လှူချင်တယ်။”
“လှူလေ ကောင်းပါတယ် ထား ရဲ့။ ကို အကုန်သဘောတူပါတယ်။ အားလုံးက ထား သဘော ထား သဘော။ အခုတော့ ထမင်းစားလိုက်ဦးနော်။ ဟင်းတွေ အေးကုန်တော့မယ်။ မနက်ဖြန်ကျ ဘဏ်စာအုပ်ယူပြီး ထား သွားထုတ်လိုက်နော်။ ကိုက ရုံးမှာ လုပ်စရာရှိတာတွေ အပြီးဖြတ်ရမှာဆိုတော့ မအားလောက်ဘူး ထင်လို့။”
“ရပါတယ် ဘဏ်စာအုပ်ကလည်း ထား နာမည်နဲ့ပဲဆိုတော့ ထား ပဲ သွားလိုက်ပါမယ်။ ကို ဒီလောက် လုပ်ပေးတာနဲ့တင် ထား ကျေးဇူးတင်ပါပြီ ကို ရယ်…။”
ပြောနေရင်းနဲ့ ထား အသံသည် တိမ်ဝင်သွားပြီး မျက်ရည်များ ကျလာသည်ကို သူတွေ့လိုက်ရသည်။
“ဟင်… ထား ငိုနေတာလား။ ဘာဖြစ်လို့ ငိုနေတာလဲ ထားရယ်။”
“ထား ဝမ်းသာလို့ပါ။ ထား တို့ ဟိုးအရင်တုန်းကလို ပြန်နေကြမယ်နော်။”
“အင်းပါ ထား ရယ်။ ကို အရင်လိုပြန်ဖြစ်ပါပြီ။ ဒီတောအတွင်း ကို့ အပြစ်တွေအတွက် ထား ခွင့်လွှတ်တော့နော်။”
“ခွင့်လွှတ်ရအောင် ကို့မှာ အပြစ်မရှိပါဘူး ကို ရယ်။ ထားဘက်က ချို့ယွင်းချက် ရှိလို့သာ ကို ထား ကို ဂရုမစိုက်တာလို့ပဲ တွေးထားတာပါ။”
ထား ပုခုံးလေးကို ဖက်ပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်တော့ ထား ခန္ဓာကိုယ်လေးသည် အလိုက်သင့်လေး ပါလာပါသည်။ သူ့ရင်ခွင်ထဲ ရောက်သည်အထိ ထား သည် အငိုမတိတ်သေး။
“တိတ်တော့လေ ထား ရဲ့။ ကလေးလေး ကျနေတာပဲ။ တိတ်တော့နော်။ ဘေးဝိုင်းတွေက ကြည့်နေရင် မရှက်ဘူးလား။”
“မရှက်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ယောက်ျား ရင်ခွင်ထဲ ဝင်ချွဲတာပဲ ရှက်စရာမှ မဟုတ်တာ။”
“ဟားဟား ဟုတ်ပါပြီ မရွှေထားရယ်။ အငိုရပ်ရင် ထမင်းစားတော့နော်။ ကို မနက်ဖြန်ကျ ခရီးသွားမယ်ပြောပြီး ရုံးစောစောဆင်းလာခဲ့မယ်။ အိမ်ရောက်မှ အိမ်တွင်းအောင်းတာပေါ့။”
“အင်းပါ။ ထား အစွမ်းကုန် ပြုစုပါ့မယ်။”
ထား က သူ့ကို ခေါင်းလေးညိတ်ပြကာ လက်သန်းလေးကို အရှေ့သို့ ဆန့်ထုတ်ပေးတော့ သူတို့ ကလေးတွေလိုမျိုး လက်သန်းချင်းချိတ်လိုက်ကြပါသည်။
ကြို မမြင်နိုင်သော မနက်ဖြန်များဟု ဆိုကြပေမဲ့ သူမြင်နေရသော ထား၏ မနက်ဖြန်များမှာတော့ အဆုံးသတ်နားနီးနေလေပြီ… တစ်စုံတစ်ရာကို ပြောင်းလဲလို့ ရနိုင်ကောင်းဟု မျှော်လင့်မိသော်ငြား ကံကြမ္မာက ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ဖြစ်နေသည့်အရာကို သူပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါမည်လား??
သရေငျ ထားတို့နောကျ ပါမယျ့ ကုသိုလျတှပေဲ လုပျကွရအောငျ ကို..
“ဒါနဲ့ ထား ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့စပွီး ကို ခှငျ့ယူထားတယျ။”
“ရှငျ… ဘာအတှကျလဲ ကို။”
“ဟငျ့အငျး ထား မသှားခငျြဘူး။”
“ဘာဖွဈလို့လဲ ထား ရဲ့။ ကိုယျ့ကားနဲ့ ကိုယျ အေးအေးဆေးဆေးပဲ သှားမှာဆိုတော့ ထား မပငျပနျးပါဘူး။”
“ဟငျ့အငျး။ ထား ပငျပနျးမှာကွောကျလို့မဟုတျဘူး ကို။ ခရီးတဈခု ထှကျဖို့ဆိုတာ လကျထဲမှာ အနညျးဆုံး ၄၊ ၅ သိနျးလောကျရှိမှ အဆငျပွမှောလေ ကိုရဲ့။”
“နှမွောစရာကွီး ကို ရယျ။ ဘာလုပျမှာလဲ။”
“ထားရယျ…. ပိုကျဆံဆိုတာက ကိုတို့သရေငျ ပါသှားမှာမှ မဟုတျတာ”
သဆေုံးသညျ့ စကားကို သူ ယောငျပွီး ထှကျသှားမိ၍ လနျ့သှားသေးပမေဲ့ ထား က သူ ဘာပွောသညျကို မသိနိုငျကွောငျး စဉျးစားမိမှ စိတျအေးရပွနျသညျ။
“အယျ့လယျ… ကိုတောငျမှ တရားတှေ ဘာတှေ ရနပွေီလား။”
“တရားရတာတော့ မဟုတျပါဘူး ထားရဲ့။ ဒီလိုပဲ ပွောကွညျ့တာပါ။”
“အငျး… ပွောလေ ထား။ ဘာပွောခငျြလို့လဲ။”
“စောနက သရေငျ ကိုယျ့နောကျမပါဘူးဆိုပွီး ကို ပွောလို့ ထား တှေးမိတာပါ။”
“ဟုတျပါပွီ ပွောပါ ထားရဲ့။”
“ထား တို့ ခရီးမထှကျတော့ဘဲ သရေငျ ထားတို့နောကျ ပါမယျ့ ကုသိုလျတှပေဲ လုပျကွတာပေါ့။”
“လုပျလေ ကောငျးသားပဲ။ ထား က ဘာတှလေုပျခငျြလို့လဲ။”
“၅ သိနျးလောကျကုနျမယျဆိုရငျ ၂ သိနျးကို မိဘမဲ့ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ သှားလှူမယျ။ နောကျ ၂ သိနျးကိုတော့ ဆေးရုံမှာ လှူမယျ။ ကနျြတဲ့ ၁ သိနျးကိုတော့ ဘုရားတညျတဲ့ထဲမှာ လှူလိုကျမယျ။ ဘယျလိုလဲ ကို။ သဘောတူရဲ့လား။”
“သဘောမတူစရာမရှိပါဘူး ထားရယျ။ ကိုရှာထားသမြှက ထား အတှကျခညျြးပဲကို။ ထား စိတျကွိုကျသာ စီမံခနျ့ခှဲပါ။ ဒါမဲ့ ကို မေးရဦးမယျ။ ဘုရားက ဘယျမှာ တညျနတောလဲ။”
“သွျော… ဟုတျသားပဲ။ ကို့ကို ပွောဖို့မနေ့တော။ ဟိုနကေ့ အိမျက ဖုနျးဆကျတယျ။ ထားတို့ဆီကလူတှေ အကုနျလုံးစုပွီးတော့ ဘုရားတဈဆူတညျကွမလို့တဲ့။ အဲ့မှာ ထား လှူခငျြတယျ။”
“လှူလေ ကောငျးပါတယျ ထား ရဲ့။ ကို အကုနျသဘောတူပါတယျ။ အားလုံးက ထား သဘော ထား သဘော။ အခုတော့ ထမငျးစားလိုကျဦးနျော။ ဟငျးတှေ အေးကုနျတော့မယျ။ မနကျဖွနျကြ ဘဏျစာအုပျယူပွီး ထား သှားထုတျလိုကျနျော။ ကိုက ရုံးမှာ လုပျစရာရှိတာတှေ အပွီးဖွတျရမှာဆိုတော့ မအားလောကျဘူး ထငျလို့။”
“ရပါတယျ ဘဏျစာအုပျကလညျး ထား နာမညျနဲ့ပဲဆိုတော့ ထား ပဲ သှားလိုကျပါမယျ။ ကို ဒီလောကျ လုပျပေးတာနဲ့တငျ ထား ကြေးဇူးတငျပါပွီ ကို ရယျ…။”
ပွောနရေငျးနဲ့ ထား အသံသညျ တိမျဝငျသှားပွီး မကျြရညျမြား ကလြာသညျကို သူတှလေို့ကျရသညျ။
“ဟငျ… ထား ငိုနတောလား။ ဘာဖွဈလို့ ငိုနတောလဲ ထားရယျ။”
“ထား ဝမျးသာလို့ပါ။ ထား တို့ ဟိုးအရငျတုနျးကလို ပွနျနကွေမယျနျော။”
“အငျးပါ ထား ရယျ။ ကို အရငျလိုပွနျဖွဈပါပွီ။ ဒီတောအတှငျး ကို့ အပွဈတှအေတှကျ ထား ခှငျ့လှတျတော့နျော။”
“ခှငျ့လှတျရအောငျ ကို့မှာ အပွဈမရှိပါဘူး ကို ရယျ။ ထားဘကျက ခြို့ယှငျးခကျြ ရှိလို့သာ ကို ထား ကို ဂရုမစိုကျတာလို့ပဲ တှေးထားတာပါ။”
ထား ပုခုံးလေးကို ဖကျပွီး သူ့ရငျခှငျထဲ ဆှဲသှငျးလိုကျတော့ ထား ခန်ဓာကိုယျလေးသညျ အလိုကျသငျ့လေး ပါလာပါသညျ။ သူ့ရငျခှငျထဲ ရောကျသညျအထိ ထား သညျ အငိုမတိတျသေး။
“တိတျတော့လေ ထား ရဲ့။ ကလေးလေး ကနြတောပဲ။ တိတျတော့နျော။ ဘေးဝိုငျးတှကေ ကွညျ့နရေငျ မရှကျဘူးလား။”
“မရှကျနိုငျပါဘူး။ ကိုယျ့ယောကျြား ရငျခှငျထဲ ဝငျခြှဲတာပဲ ရှကျစရာမှ မဟုတျတာ။”
“ဟားဟား ဟုတျပါပွီ မရှထေားရယျ။ အငိုရပျရငျ ထမငျးစားတော့နျော။ ကို မနကျဖွနျကြ ခရီးသှားမယျပွောပွီး ရုံးစောစောဆငျးလာခဲ့မယျ။ အိမျရောကျမှ အိမျတှငျးအောငျးတာပေါ့။”
“အငျးပါ။ ထား အစှမျးကုနျ ပွုစုပါ့မယျ။”
ထား က သူ့ကို ခေါငျးလေးညိတျပွကာ လကျသနျးလေးကို အရှသေို့ ဆနျ့ထုတျပေးတော့ သူတို့ ကလေးတှလေိုမြိုး လကျသနျးခငျြးခြိတျလိုကျကွပါသညျ။ ကွို မမွငျနိုငျသော မနကျဖွနျမြားဟု ဆိုကွပမေဲ့ သူမွငျနရေသော ထား၏ မနကျဖွနျမြားမှာတော့ အဆုံးသတျနားနီးနလေပွေီ… တဈစုံတဈရာကို ပွောငျးလဲလို့ ရနိုငျကောငျးဟု မြှျောလငျ့မိသျောငွား ကံကွမ်မာက ဆုံးဖွတျပွီးသား ဖွဈနသေညျ့အရာကို သူပွောငျးလဲလိုကျဖို့ ဖွဈနိုငျပါမညျလား??
Tags: betray, Confess, fiction, Fun, love, Past, Time, Traitor